I-China Dual 10-inch two-way full-range mobile performance speaker isikhulumi esishibhile sohlelo lwesipikha sokukhiqiza kanye nefektri | Isi-Lingjie
I-GL Series Dual 10-intshi enezindlela ezimbili ezisebenza ibanga lesipika yesipikha esishibhile yohlelo lwesipika
Uchungechunge lwe-GL luwuhlelo lwezipikha ezihamba ngezindlela ezimbili ezinosayizi omncane, isisindo esincane, ibanga elide lokuqagela, ukuzwela okuphezulu, amandla angena ngamandla, izinga lokucindezela umsindo omkhulu, izwi elicacile, ukuthembeka okuqinile, nokufakwa komsindo phakathi kwezifunda. Uchungechunge lwe-GL lwenzelwe ngokukhethekile amathiyetha, izinkundla zemidlalo, ukusebenza kwangaphandle nezinye izindawo, ngokufakwa okuguqukayo nokulula. Umsindo wayo ucacile futhi ubumnene, amaza aphakathi nendawo aphansi awugqinsi, futhi inani elisebenzayo lebanga lokuqagela umsindo lifinyelela kumamitha angama-70.
Uchungechunge lwe-GL luwuhlelo lwezipikha ezihamba ngezindlela ezimbili ezinosayizi omncane, isisindo esincane, ibanga elide lokuqagela, ukuzwela okuphezulu, amandla angena ngamandla, izinga lokucindezela umsindo omkhulu, izwi elicacile, ukuthembeka okuqinile, nokufakwa komsindo phakathi kwezifunda. Uchungechunge lwe-GL lwenzelwe ngokukhethekile amathiyetha, izinkundla zemidlalo, ukusebenza kwangaphandle nezinye izindawo, ngokufakwa okuguqukayo nokulula. Umsindo wayo ucacile futhi ubumnene, amaza aphakathi nendawo aphansi awugqinsi, futhi inani elisebenzayo lebanga lokuqagela umsindo lifinyelela kumamitha angama-70. Kwikhabethe le-plywood eliphakeme kakhulu, liqukethe amashayeli we-low-frequency 6.5 / 8/10 inch high performance frequency driver kanye no-75mm high-frequency driver on the high-frequency horn efaka i-angle engu-110 ° enezingqimba × 10 ° mpo, ngempumelelo lawula imvamisa ebangeni elidingekayo, ukunciphisa kakhulu ukubonakaliswa kwamagagasi omsindo. Amandla athwala umthwalo aphezulu, afanele ukusebenza ngaphansi kwamandla amakhulu isikhathi eside, ukuqinisekisa ukuthi inqubo yokusetshenziswa kweyunithi ifinyelela ukuthembeka okuphezulu, imvamisa ebanzi, nomfutho ophakeme womsindo!
Izinto zalo zangaphakathi zifakwe isihlukanisi semvamisa ekwenziwayo kanye nesekethe yokuvikela imvamisa ephezulu. Isekethe yokuvikela imvamisa ephezulu ingavimbela umshayeli we-tweeter ukuthi alayishwe ngokweqile futhi alimale. ngakho-ke lokho kungasetshenziswa ezindaweni ezahlukahlukene.
I-GL yochungechunge lwekhabethe isebenzisa i-15mm multilayer high-density plywood, isebenzisa ikhompyutha ukubala indawo engcono kakhulu yokusekelwa kwe-acoustic ngaphakathi kwekhabethe, futhi yenziwa ngobuchwepheshe be-concave-convex groove ukwenza ikhabethe liqine. Ngasikhathi sinye, kusetshenziswa izinzipho zokuqinisa amandla aphezulu ukunciphisa ukuhlanekezwa kwemisindo okubangelwa ukugqama kwekhabinethi. Ikhabethe elingaphandle lenziwe ngopende wokufafaza amanzi onobungani obunamandla emvelo, i-mesh yensimbi eshaywayo, nesiponji se-acoustic esithunyelwa emuva esithunyelwa emuva. IKhabinethi yenzelwe ukufakazela umswakama nokuqinisekisa uthuli ukuqinisekisa ukusebenza okuzinzile ezindaweni zothuli, intuthu nezindawo ezinomswakama. Kuyisinqumo sakho esingcono kakhulu sokubamba noma yimiphi imidlalo esezingeni eliphakathi nendawo, izingqungquthela, amaqembu akusihlwa nobunjiniyela bezinhlelo zamakhonsathi!
Isetshenziselwa izinkundla zemidlalo yaseshashalazini, izinkundla zemidlalo, ukuqhutshwa kwangaphandle, ama-nightclub, imigoqo yokubonisa yasendlini, izigaba ezinkulu, imigoqo, amahholo asebenza imisebenzi eminingi, nezinhlelo zokufaka ezihleliwe.
imodeli I-GL-206 I-GL-208 I-GL-210
Thayipha izikhulumi zamalungu afanayo ezi-6.5-intshi izipikha ezimbili ezi-8 intshi eziqondile izipikha ezilandelanayo ezi-10-intshi ezilandelanayo
Uhlobo lweyunithi I-1x1.75-intshi tweeter 1x3-intshi tweeter 1x3-intshi tweeter
2x6.5-intshi woofer 2x8-intshi woofer 2x10-intshi woofer
Impendulo ejwayelekile 80-18KHz 75-18KHz 70-18KHz
Amandla alinganisiwe 400W 500W 600W
Ukuzwela I-97dB 99dB I-101dB
Ubukhulu be-SPL 130dB 132dB 134dB
Imodi yeDrayivu ukuhlukaniswa kwemvamisa kwe-2 okwakhelwe ngaphakathi ukuhlukaniswa kwemvamisa kwe-2 okwakhelwe ngaphakathi ukuhlukaniswa kwemvamisa kwe-2 okwakhelwe ngaphakathi
Impahla yeKhabinethi 15mm multilayer ibhodi 15mm multilayer ibhodi 15mm multilayer ibhodi
Indlela yokuxhuma Isipikha se-2x NL4 Isipikha se-2x NL4 Isipikha se-2x NL4
WP4 Faka u-1 + 1- Faka u-1 + 1- Faka u-1 + 1-
I-angle yokubheka (Hx V) 110 ° x10 ° 110 ° x10 ° 110 ° x10 °
Ubukhulu (WxHxD) 590x210x330mm 755x250x380mm 890x295x460mm
Isisindo sengqikithi 15.2kg 25kg 34.5kg
Imodeli yesipikha I-GL-206B I-GL-208B I-GL-210B
Thayipha I-subwoofer yokwenziwa ngamasentimitha angu-15 I-subwoofer yokwenziwa ngamasentimitha angu-18 I-subwoofer yokwenziwa ngamasentimitha angu-18
Uhlobo lweyunithi 1x15-intshi woofer 1x18-intshi woofer 1x18-intshi woofer
Ikhoyili yezwi engama-75mm Ikhoyili yezwi eyi-100mm Ikhoyili yezwi eyi-100mm
Impendulo ejwayelekile 40-200Hz 38-200Hz 38-200Hz
Amandla alinganisiwe 500W 700W 700W
Ukuzwela I-97dB 99dB 99dB
Ubukhulu be-SPL 129dB 136dB 136dB
Impahla yesakhiwo seKhabinethi 15mm multilayer plywood esiyinhlanganisela 15mm multilayer plywood esiyinhlanganisela 15mm multilayer plywood esiyinhlanganisela
Indlela yokuxhuma Ukufakwa kwe-2x NL4MP 1 + 1- Ukufakwa kwe-2x NL4MP 1 + 1- Ukufakwa kwe-2x NL4MP 1 + 1-
Ubukhulu (WxHxD) 590x450x540mm 755x520x640mm 890x520x750mm
Isisindo sengqikithi 37kg 52kg 93kg
Ukubuyekezwa Kwamacala Ephrojekthi:
I-GL-208 Dual-8 line array imi e-Aksu Education College, inikela ngemiphumela esezingeni eliphezulu yokuqinisa umsindo.
Ngokuya ngezidingo zokwakhiwa kwemisindo yendawo kanye nemininingwane emihle, lonke uhlelo lwehholo lokuqinisa umsindo lisebenzisa igama elithi TRS AUDIO leLingjie Enterprise. Ukuqiniswa komsindo oyinhloko kwesokunxele nangakwesokudla ngama-12pcs.
Izipikha zomugqa ezi-820 ze-GL208 ezimbili, kanye ne-2pcs subwoofers GL-208B. Izipikha ze-2pcs B-28 eziphindwe kabili ezingamasentimitha angu-18 zisetshenziswa kwi-subwoofer, futhi izipikha ezine ezigcwele ezigcwele ze-FX ziyasetshenziswa esiteji sokuqapha. Izipikha ezizungezile ezingama-8pcs zisetshenziselwa ukugcwalisa ihholo lonke, ukuqinisekisa ukuthi zonke izihlalo zizwa umsindo onembile futhi ocacile.
Langaphambilini Isistimu yesipikha esinezinhlangothi ezimbili ezigcwele ngamasentimitha amabili asezingeni eliphelele eline-neodymium driver
Olandelayo: Isistimu yesipikha esisebenza ngamasentimitha angu-15 ububanzi